MM Dr Abiy Ahimad ergama seera kabachiisuutiin Raayyaan ittisa biyyaa guyyoota muraasa darbanitti injifannoon galmeessise kan dinqisiifatamu jedhan – Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
MM Dr Abiy Ahimad ergama seera kabachiisuutiin Raayyaan ittisa biyyaa guyyoota muraasa darbanitti injifannoon galmeessise kan dinqisiifatamu jedhan
On Nov 21, 2020 762
Finfinnee, Sadaasa 12, 2013 (FBC) – Muummeen Ministiraa Dooktar Abiy Ahimad ergama seera kabachiisuutiin Raayyaan ittisa biyyaa guyyoota muraasa darbanitti injifannoon galmeessise kan dinqisiifatamu jedhan.
Dooktar Abiy Raayyaan Ittisa Biyya keenyaa kaleessa galgala naannoowwan Addigiraata erga to’atee booda ,har’a immoo Addigiraatiin humna TPLF jalaa bilisa baasee jira.
Mootummaan Federaalaa magaalotaafii iddoowwan to’atamanitti lammiilee argaman, humnoota nageenyaatiin eegumsi taasifamaafii gara jireenya isaanii guyyuutti deebi’uu eegalanii jiraachuu ibsaniiru.
Ummattoota Ityoophiyaa waliin ta’uun fedhiin hawaasummaafii namummaa isaanii akka guutamuuf haala mijeessina jedhan.
Hojii deeggarsa namoomaa hordofuuf Koreen Olaanoon Mootummaa Federaalaatiin hundaa’e, deeggarsa madaalawaafi wayitaawaa kennuuf akka dandeesisu haala qabatamaa jiru kan qulqulleessan jila gara sanatti ergee jira.
Dabalataanisa koreen kun lammiilee yeroo darbe mana jireenyaa isaanii gadhiisanii baqatan,deenisanii qubachiisuufi ijaaruuf qaamota dhimmi ilaallatu waliin hojjii isaa itti fufa.
Mootummaan Federaalaa Uummata Tigiraayii hundaaf Nageenyaafi Fayyaa isaaniif gatii guddaa kan kennu waan ta’eef,Naannoo Tigiraayitti tasgabbiin akka uumamuufi lammiileen keenya miidhaafi dhabiinsa irraa bilisa akka ta’aniif waan barbaachisu hunda ni taasifna jeshaniiru.
Bu’ura filannoon bilisaa fi haqa qabeessi itti gaggeeffamu …